PUBG APK ကို - သိကောင်းစရာများနှင့် Tricks, Mods နှင့် cheat Android အတွက်
ပင်မစာမျက်နှာ » ဘ‌‌လော့ခ် » PUBG APK ကို - သိကောင်းစရာများနှင့် Tricks, Mods နှင့် cheat Android အတွက်
အန်းဒရွိုက် APK ကိုများအတွက်သိကောင်းစရာများနှင့် Tricks, Mods နှင့် cheat - PUBG APK ကို
ဤသည်နေ့ရက်ကာလ, PUBG သို့မဟုတ် PlayerUnknown ရဲ့စစ်မြေပြင်အရှိဆုံးပြောဆိုသော-အကြောင်းကိုထားပြီးနှင့် Google Play စတိုးအပေါ် No.1 တိုက်ပွဲ Royale ဂိမ်း။ PUBG ပိုင်းတွင် PC အတွက် Bluehole Studio ကစတင်ခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းပေါ် Tancent အခမဲ့ PUBG မိုဘိုင်းစတင်ကခြီးမှမျးအလုပ်အကိုင်အပြုတော်မူပြီ။ သငျသညျယခုသင့်ရဲ့ Android device ကိုပေါ်အခမဲ့ PUBG မိုဘိုင်းဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်။ ဒေါင်းလုပ်ဆွဲခြင်းမပြုမီ PUBG APK ကို၎င်း၏နိမ့်ဆုံးလိုအပ်ချက်စဉ်းစားရန်သေချာစေပါ။
PUBG - Android အတွက်လိုအပ်ချက်များ
အဆိုပါ PUBG မိုဘိုင်းယခု Android ထုတ်ကုန်၏ 500 အမျိုးအစားများကိုကျော်ထောက်ခံပါတယ်။ သငျသညျရှိသည်ဖို့လိုအပ်သမျှကို Android 5.1.1 Lollipop သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်းဗားရှင်းနဲ့ RAM ကိုအနည်းဆုံး 2GB ဖြစ်ပါတယ်။
PUBG မိုဘိုင်းသိကောင်းစရာများနှင့် Tricks
PUBG အားလုံး 100 အခြားကစားသမားနှင့်အတူကပေါ်လေယာဉ်ဆင်းသက်ခြင်းဖြင့်ဝေးသောကျွန်းအတွက်ကျန်ရစ်သူအကြောင်းပါ။ သငျသညျလျင်မြန်စွာထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ, လက်နက်နှင့်ယာဉ်များကိုယူပြီးတော့သူ, နောက်ဆုံးသောယောက်ျားသည်ရပ်တည်မှုဖြစ်လာမှလူတိုင်းကိုဆင်းယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီနေရာတွင်ကကူညီစေခြင်းငှါ၎င်းအကြံပေးချက်များနှင့်လှည့်ကွက်များမှာ -
အဝတ်အစား - PUBG သင်သည်အခြားသူများကိုဆန့်ကျင်တိုက်ထုတ်နိုင်ဖို့ရှိသည်ဘယ်မှာရှင်သန်ရပ်တည်ရေး၏ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကွောငျ့, Tactical အဝတ်ကိုရွေးချယ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အဲဒီအစားမဆိုကျပန်းအထည်ရွေးချယ်ရာတွင်ထက်သင်ကစားရန်သွားနေသော mode ကိုအညီကောက်ဖို့ပညာရှိဖြစ်၏။ သငျသညျ (ကတောကျွန်းဖြစ်သော) Miramar သို့ဆင်းသက်ချင်လျှင်ဥပမာ, သဲ-ရောင်စုံအဝတ်ကိုရွေးချယ်ပါ။ နောက်တစ်မျိုးအနေနဲ့, ဒါကြောင့်အဘယ်သူမျှသင့်ကိုခြေရာခံနိုင်ပါတယ် Erangel တစ်ဦးရိုင်းတီရှပ်ဝတ်ဆင်။
Less ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းဧရိယာအတွင်းမြေယာ - လေယာဉ်ဆင်းသက်မီသင်သာအနည်းငယ်ကလူကိုတွေ့လိမ့်မည်ရှိရာတည်နေရာနှင့်ပိုပြီးစားသုံးသူများ, လက်နက်များနှင့်အခြားထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများကိုရွေးချယ်ပါ။ သငျသညျအစောပိုင်းကပစ်သတ်ခံစရာမလိုဘဲသင်လိုအပ်တိုင်းကို item ရနိုင်သည်။ Erangel မြေပုံ, သင် Mylta ပါဝါ, ကျောင်း, နှင့် Rozhok ရွေးချယ်နိုင်သည်။
မြေပုံပေါ်တွင်မျက်စိ Keep - လက်ဝဲဘက်ထောင့်တွင်, သင်ခြေရာနှင့်သေနတ်အားဖြင့်သင်တို့၏ရန်သူတို့ကိုခြေရာခံစောင့်ရှောက်နိုင်မည့်တိုက်ရိုက်မြေပုံပြသထားတယ်။ ဒါဟာအစလုံခြုံနှင့်အပြာရောင်ဇုန်ပြသထားတယ်။
peek နှင့်မီးဘေး - သင် settings ကိုသွားနေဖြင့်ဒီ feature ကို enable ရန်ရှိသည်။ ဒါဟာမျက်နှာပြင်၏လက်ဝဲဘက်အပေါ်အထက်ကိုယ်ခန္ဓာ၏ icon နှစ်ခုပြသပါလိမ့်မယ်။ ဤနည်း, သင်သည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ဖုံးကွယ်သာသင်၏ခေါင်းကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားနိုင်သည်။
အမြဲတမ်းကစားသမားနှင့်အတူဆော့ကစားခြင်းနှင့်နားကြပ်ကိုသုံးပါ - အမြဲတမ်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းခြေရာနှင့်သေနတ်နားထောင်ရန်နားကြပ်ကိုအသုံးပြုပါ။ ဒါ့အပြင်သင့်ရဲ့ကစားသမားနှင့်အတူထိတွေ့နေဖို့သူတို့နှင့်အတူကစား။ သငျသညျအထဲကခေါက်ရအမှု၌, သူတို့ကပြန်လည်ရှင်သန်သငျသညျကိုငါပေးမည်တဲ့မျှော်လင့်ချက်ရှိနေတုန်းပဲ။ ဒါဟာအစကြက်ညစာစားပွဲအနိုင်ရတဲ့၏အခွင့်အလမ်းတွေကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်။
ကောင်းသောအဖုံးကို ယူ. ရွေ့လျားစောင့်ရှောက် - PUBG ရန်သူများကိုရိုက်ကူးဖို့တစ်နေရာတည်းမှာတည်းခို၏ဂိမ်းမဟုတ်ပါဘူး။ ရုံရွေ့လျားစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်တာရှည်ရှင်သန်ရန်ကောင်းသောအဖုံးများယူပါ။ တစ်ခါတစ်ရံကအားလုံးကိုသေဆုံးရတဲ့အကြောင်းကိုတော့မဟုတ်ပါဘူး။
PUBG APK ကို Download လုပ်ပြီး Install လုပ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
လူအပေါင်းတို့၏ပထမဦးစွာသင့်ရဲ့ Android device ကိုအပေါ် PUBG APK ကို၏နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းဒေါင်းလုဒ်ဆွဲပါ။
က Settings> လုံခြုံရေးကိုသွားပါ
ထို option ကို "Unknown Sources" ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း။ ဒီ option ကို Enable လုပ်ထားပါ။
ယခုတွင်သင်သည် Google Play စတိုးကနေဆိုလိုသည်မှာအမည်မသိရင်းမြစ်များမှ apps များထွက်ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်။
Downloads ဖိုင်တွဲထဲမှာ PUBG APK ကိုအပေါ်ကိုအသာပုတ်နဲ့ Install ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
ငါတို့သည်သင်တို့ဂိမ်းကျွမ်းကျင်ဖို့ PUBG APK ကိုနှင့်အကြံပေးချက်များနှင့်လှည့်ကွက်ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်အားလုံးအထက်ပါခြေလှမ်းများကြိုက်တယ်မျှော်လင့်ပါတယ်။ အခုဆိုရင်သင် PUBG APK ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီးန့်အသတ်ကို BP, UC နှင့်ကျည်ဆန်ရနိုင်သည်။ ဤသည် mod ကိုသင်တက်နှင့်သင့်ရမှတ်တိုးမြှင့်ကူညီပေးပါမည်။
tracker ကွန်ယက် ...
PUBG Download PUBG အန်းဒရွိုက် PUBG APK ကို PUBG cheat PUBG Mods PUBG သိကောင်းစရာများ PUBG Tricks